Inay CR7 Ku Tiirsan Yihiin, Guushii Girona, Bandhigii Vasquez-Asensio & Zidane Oo Fariin U Diray Daafacyadiisa %
Real Madrid, ayaa waxay guul fiican oo muhiim ahayd waxay kaga gaareen gurigooda dhigooda Girona, kadib markii ay kusoo dar-dareen kooxdaan reer Catalan 6-3 ciyaaryahan bandhig sare ay sameeyeen dhamaan wiilashii uu Zidane soo aaminay.
Marcos Asensio iyo Lucas Vasquez waxay ahaayeen kuwa inta badan ay shaashadu soo qabaneysay, waxaana ciyaarta kadib uu Zidane uu ugu qubeeyay ciyaartoydaan reer Spain amaan waali ah, taasoo ka marag-kaceysa sida uu u aaminsan yahay.
“Inay garoonka kugu waa wax ay uqalmaan, maxaa yeelay waxay sameynayaa waxyaabo wanaagsan – Waa mid qiimo badan inaad iyaga la shaqeyso – Qof hana soo eego, waxaan diyaar unahay in kulamada noo harsan aan sidaas sii wadno,” ayuu yiri Zidane.
Isagoo ka hadlayay bandhig ciyaareed uu Cristiano Ronaldo uu garoonka ka sameeyay ayaa wuxuu sheegay in mar walba oo uu wanaagsan kabtanka qaranka Portugal ay Real Madrid fiican tahay uuna kooxda siiyo CR7 tamar badan.
“Marka uu xili ciyaareedku yahay gaba gabo ayuu muuqaal ciyaareed fiican sameeyaa, si fiican ayaan ugu naqaanaa midaas, waliba idinga ayaa sidaas ku yaqaano, waa mid cajiib ah, kaasoo kooxda tamar badan ku shubo,” ayuu Zidane sii daba dhigay.
Mar wax laga weydiiyay dhibaatada wali ka taagan waaxda daafaca ee kooxdiisa ayaa wuxuu cod dheer ku sheegay in taasi uu isaga arkayo, laakiin ay wax badan ka qaban doonan kulamada soo aadan, uusan ku farax-saneen goolashii a Girona ka dhalisay.
“Goolal badan ayaan ku dhalinay garoonkeeda intii lagu guda jiray xili ciyaareedkan, waxaana taasi ku helnay kalsoonideeda oo badan, marka aad haysato kalsoonida waxaa mar walba udhow-dahay guusha,” ayuu ku cel-celiyey.
“Kuma farax-sani goolasha ay naga dhalisay [Girona] – Waana inaan horumarinaa daafacyadeena, maxaa yeelay waxaana diyaar unahay inaan wax badana aan ka qabano midaas,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Mucalimuu Zidane.
AsensioCR7La LigaReal Madrid vs GironaVasquez
PSG Oo Bayaan Kasoo Saartay Hadii Uu Neymar Dalbaday Kordhinta Mushaarkiisa Si Uu Kooxda U Joogo